Fantatra ny fakantsary amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny mpiasa | Vahaolana OMG
Fantatra ny fakantsary amin'ny fakan-tsary mifono vatan'ny mpiasa
Ny fakantsary dia tokony hitarika ny fihenan'ny herisetra amin'ny polisy. Manahy ny mifanohitra amin'izay ny mpitsikera. Ny olana dia fifehezana tokana.
Kamera iray eo am-tsoratry ny polisy
Tokony handeha mandritra ny fotoana rehetra ve izy?
Body-cams no farany fanararaotana ataon'ny polisy. Ny fanjakana federaly iray taorian'ny iray hafa dia mamorona fototra ara-dalàna ho an'ny fampiasana fakantsary kely amin'ny soroka na eo amin'ny paosin'ny polisy. Hatreto, ny polisy dia ankasitrahana manokana ny fanavaozana. Na koa mitondra tombony amin'ny fomba fijery sivily izany dia miankina tanteraka amin'ny famolavolana azy.
Amin'ny alàlan'ny fakantsary manana lenta mavesatra napetraka eo an-tsoron'ny polisy, dia ho arahi-maso ny fihetsika ataon'ny olona.
Ny fepetra dia iray, manamarina fa ny asa marina ataon'ny polisy, araka ny voalazan'ny protocols ary roa, mba hialana amin'ny fisehoan'ny kolikoly mety ho tratran'ny kolikoly, ary ny isa telo, dia misy koa ny fananana porofo rehefa mitaraina amin'ny fihetsiky ny polisy izy ireo.
Mino ny polisy fa ny firaketana ireo fifehezana fifanoherana dia mampihena ny herisetra amin'ny polisy. Miahiahy ny mifanohitra amin'izay ny mpitsikera. Matetika ny mpimamo no mamo, ary mety hahatsindry fo amin'ny fampiasan-tsary. Samy mandaitra ny feo roa. Azo inoana fa ny polisy no ho voalohany raha hitatitra ny Body-cams raha manohitra tokoa ny fahasalaman'ny manampahefana.
Ny olana faharoa dia ilay antsoina hoe fandraketana mialoha. Ka ny fampahavitrihana ny fakantsary sy ny minitra teo aloha dia misy - izay ilaina ho an'ny fahazoana ny toe-javatra - dia tsy maintsy mandeha foana ny fakantsary. Ireo mpiaro ny angon-drakitra dia mahita izany ho fitazonana data vaovao. Toa somary avo be ihany ilay teny. Ao amin'ny fitazonana ny angona an-tariby, ny fitondrantenan'ny serasera manerana ny mponina dia farafahakeliny enina herinandro navoaka. Etsy an-danin'izany dia momba ny firaketana sary sy feo amin'ny segondra 60 fotsiny izy io - ary amin'ny toe-javatra iray izay tsy anaovan'ny polisy hetsika mangingina fa an-kalalahana.
Ny olana indrindra dia ny fifehezana tokana amin'ny body-cams. Satria io dia mpitandro filaminana irery ihany no mamaritra hoe oviana no voatahiry maharitra ilay sehatra. Ary afaka manidy ny fakantsary amin'ny fotoana rehetra izy. Ny fanombanana ny firaketana an-tsoratra dia tanterahan'ny polisy. Noho izany, ny hita maso dia miharihary fa ny Body-cam irery ihany no manohintohina ireo olompirenena fa tsy ny mpitandro ny filaminana akory no jerena. Ny body-cam amin'izay dia tsy tanjona, fa fomba fanondroana azo ampiasaina.
Ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny University of Cambridge dia nahitam-bokatra mahavariana: rehefa afaka namadika sy nanala ny Body-cam ny polisy, dia nitombo ny 73 isan-jato ny fampiasana herisetra nataon'ny polisy. Mifanohitra amin'izany, raha ny fakantsary dia mihazakazaka mandritra ny haingam-pandeha, ny fampiasana herin'aratra dia nidina an-jatony 36. Ny tena fanalefahana dia toa tsy ho vita raha toa ka voarakitra an-tsakany sy an-davany tanteraka ny firaketana Body-cam. Izany dia tsy maintsy resahina indray miaraka amin'ny manampahefana fiarovana data. Ary afaka aseho ny polisy amin'izao fotoana izao raha ny amin'ny fiarovana ny polisy na ny fitsimbinana ny olona rehetra voakasik'izany daholo.
"Azo alaina ny teknolojia ka maro ireo departemanta pôlisy ao amin'ny fanjakana ary ny firenena dia hanana fakantsary vatana, hanana horonantsary avy amin'ny fomba fijerin'ny manamboninay, hahitana izay tadiaviny,"
Ny polisy dia tsy maintsy, alohan'ny hampiasana sy hanangonany ireo firaketana ireo, dia hamaritra hoe oviana no hanangonany azy ireo, amin'ny toe-javatra inona no hataon'izy ireo, amin'ny toe-javatra izay avela atao, inona no hataony ankehitriny, amin'ny fomba sy rahoviana ary rava.
Ny fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana dia midika ny firaketana ny fatran'ny horonan-tsarimihetsika miharihary be dia be miaraka amin'ny fifandraisana miaraka amin'ireo olona mety ho fantatra. Amin'ireo fifampiraharahana ireo dia azo raisina an-tsoratra ny anarana, ny firazanana, ny foko, ny loko na ny taonan'ny tsirairay. Ireo firaketana an-tsoratra ireo, ankoatry ny haitao vaovao momba ny famakafakana horonantsary sy ny fanekena ny endrika, dia mamela ny fampiharana ny lalàna hahatratra ny haavon'ny fahatsiarovana tsy mbola nisy toy izany teo alohan'ny fampahafantarana olona iray. Ny fampahalalana rehetra momba ny "olona azo fantarina" dia raisina ho fampahalalana momba ny tena manokana amin'ny alàlan'ny lalàna momba ny fiarovana ny mombamomba ny mombamomba ny lalàna (PIPEDA).
Ny fizarana 7 an'ny PIPEDA dia manome fa "ny fampahalalana manokana dia tsy azo angonina raha tsy misy ny fahalalana sy ny faneken'ny olon-tsotra", raha tsy hoe, ankoatry ny zavatra hafa, "ny famoriam-bola dia mitombina amin'ny tanjona manadihady amin'ny fanitsakitsahana ny fifanarahana na ny tsy fandikana ny fifanarahana. lalàna federaly na faritany “. Na izany aza, ny fitsipiky ny polisy tsirairay dia tsy voatery hanaovana fanadihadiana. Raha ny fanajana sy ny tsiambaratelo ny mombamomba anay manokana dia tsy azo esorina amin'ny rafitry ny lalàna ny fampiasana ireo fakan-tsary amin'ny vatana. Ny fampiasana maimaimpoana an'io teknôlôjia io dia hanaratsy ny dikan'ny fiheverana ny tsiambaratelo.
Tsy mijanona eo ny loza ateraky ny fananana fiainana manokana. Tsy vitan'ny manampahefana namorona afa-tsy ny hoe iza ianao fa izay lazainao koa. Ambonin'izany, tsy misy mahasakana ireo fakan-tsary amin'ny firaketana ny mombamomba ireo mpandalo tsy misy ny fahalalana azy ireo. Ity teknôlôjia ity dia tsy maintsy miditra moramora ao amin'ny fiarahamonintsika mba tsy handikan-tena amin'ny fiainana manokana.
Amin'io lalan-draha io ihany dia mahaliana ny manamarika fa ny olan'ny fakantsary dia miatrika hevitra izay zaraina anatiny. Ho fanampin'ny ahiahy ara-dalàna, ny fanararaotana ireo fakan-tsary amin'ny vatana dia maneho fampiasam-bola manan-danja amin'ny fotoana sy ny fananana ao amin'ireo tarika voakasik'izany.
Ny fanamby dia ny fanangonana ny fanambaran'ny vavolombelona sy ireo niharam-boina. Hitanay fa ny olona dia tsy sahy mijoro ho vavolombelona satria fantany fa voatazona anaty horonantsary. Misy ny olona tsy manaiky hosoratana. Ny hafa kosa manandrana mandinika ny fakantsary. Ny fakantsary tsy maintsy mitrandraka manual dia fanamby ho azy irery. Ho an'ny… manamboninahitra izay mbola tsy nanana azy ireo dia tsy maintsy mianatra ny fomba fiasan'izy ireo ary mahatsiaro ny fomba hanaovana izany ao anaty toe-javatra manahirana. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny manamboninahitra dia mila mihoatra ny antsasaky ny herintaona noho ny hetsika fitodihana amin'ny fakan-tsary dia lasa voajanahary.
Fantatra ny fakantsary amin'ny fakan-tsary mifono vatan'ny mpiasa no farany niova: Desambra 2nd, 2019 by Admin
3053 Total Views 4 Views Today
5 Zavatra tokony ho fantatra momba ny fakantsary polisy
Tombontsoa amin'ny fakantsary ara-batana avy amin'ny indostria
Torolàlana ho an'ny fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana
Fa maninona no manampy ny fitantanana ny lalàna ny fakan-tsary?
Ny fakantsary fiadian'ny polisy sy ny tsiambaratelo
Fampiasana fakantsary miady amin'ny vatana avy amin'ny Indostria
↳ BWC065 - Helmet fakan-tsary 4G WIFI Camera fiarovana fiarovana Kamerona
↳ BWC058-4G - fakan-tsary OMN Mini Body miaraka amin'ny fankatoavana tarehy (WIFI / GPS / 3G / 4G)
↳ BWC009 - WIFI / 4G / GPS Fantsakan-doham-pirinty GPS
Fitaovana - Kamera Worn Body
↳ BWA015 - Helmet Body Worn Holder Camera
↳ BWA008-TS - Body Cam Tripod Mitsangana
↳ BWA006-RSH - Body cam Reflective Harb Strap
↳ BWC010-LC - Clip Fanakan-tsary an'ny vatan-tsary
↳ BWA003 - Tendrombohitra kitapom-bolon-koditra hoditra
↳ Fantatra ny fakantsary amin'ny fakan-tsary mifono vatan'ny mpiasa
↳ Ny Minim-bahoaka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Fiakarana ambany fakan-tsary avy amin'ny polisy
↳ Ny fakan-tsary amin'ny vatana mety tsy ho Didy farany
↳ Sarin'ny polisy niasa tamin'ny fakantsary miendrika vatana
↳ Ny antony dia mety tsy hanazava ny zava-misy ny fakan-tsary amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Camera-Worn Camera napetraka ao amin'ny Toeram-pitsaboana
↳ Manaitra ny ahiahy mikasika ny filaminana sy ny tsiambaratelo amin'ny fakan-tsary amin'ny vatan'ny polisy
↳ Body Camera Worn tsy afaka namaha ny toe-javatra rehetra
↳ Fampitomboana ny ahiahy momba ny fiarovana sy ny tsiambaratelo amin'ny famoahana fakantsary miendrika vatan'ny polisy
↳ Maninona no tsy dia mazava ny fahazoan-dàlana amin'ny vatana-cam
↳ Fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana eo amin'ny toeram-pitsaboana
↳ Ny Kameran'ny polisy miaro ny filaminana sy ny ahiahy manokana
↳ Ahoana no fiantraikan'ny fakan-tsary mpiasan'ny vatana ny polisy any Azia
↳ Ny mpiasa miasa saina amin'ny fampiasana Camera-Worn
↳ Na eo aza ny fetra, mbola misy malaza ny fakantsary amin'ny polisy
↳ BWC094 - fakan-tsary miakanjo Mini azo alaina (Kely SD azo esorina)
↳ BWC089 - 16 Kamera Mpitam-badin'ny maivana maivana 170 ora
↳ BWC090 - fakan-tsary miady amin'ny polisy maivana ho an'ny mpiambina fiarovana (Angle Wide 170-Degree 12 hrs miasa)
↳ BWC083 - Kamera miasan'ny mpitandro filaminana mavesatra ho an'ny mpiambina (Waterproof, Wide Angle 130-Degree, 12 Hour miasa, 1080p HD)
↳ BWC081 - fakan-tsary miakan'ny vatan'ny polisy Mini Mini WIFI (140 degre + fahitana amin'ny alina)
↳ BWC074 - fantsom-batana mavesatra mavesatra fantsom-batana Mini miaraka amin'ny famoronana Super horonantsary - 20-25 Ora ho an'ny 32GB [Tsy misy fakantsary LCD]
↳ BWC055 - fakan-tsary SD Card kely azo esorina
↳ Lanja Weight WIFI Fampiharana ny lalàna Lalàna Camera, Video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
↳ BWC010 - fakantsary miakanjo ny polisy Mini Mini, 1296p, 170Deg, 12 ora, fahitana amin'ny alina
↳ BWC003 - fakan-tsary mihetsika an'ny polisy Mini
↳ WIFI Portable Security Security 12MP Camera, 1296P, H.264, fanaraha-maso App (SPY084)
↳ Fitaovam-pitiavam-bidy mitera-pery (BWC056)
↳ OMG 8 seranan-tsambo miaraka amin'ny Display (BWC038)
↳ Mpitondra fakan-tsary mihetsika ambony amin'ny polisy polisy any Singapore
Inona no atao hoe fakan-tsary?
Ireo fakantsary Worn Body dia toa ny anarana manondro, fakan-tsary izay mandeha amin'ny vatan'ny olona iray. Vokatr'izany dia mirakitra ny fiainana andavanandron'ity olona manokana ity ny fakantsary. Toy ny hoe maso maso fanampiny io. Ny fakantsary dia apetaka anaty boaty metaly izay manana bateria ao anatiny. Ny bateria dia raisina andraikitra. Avy eo afatotra ilay boaty dia apetaka eo amin'ny lafiny anoloan'ny vatan'ny olona tsirairay. Noho izany, ny lisitry ny olona isan'andro dia ao anaty fakantsary. Ny firaketana an-tsary nataon'ny fakantsary dia voatahiry ao anaty karatra fitadidiana miraikitra ao anaty boaty, mba hahitana izay firaketana an-tsoratra.